Simba Rinobatsira Mawiricheya uye Multiple Sclerosis
Multiple Sclerosis chirwere chisingaperi chinokonzerwa nekukuvara kwemasero etsinga mu musana uye uropi. Chaiwo zviratidzo zvinogona kusanganisira kupera simba kwemhasuru dexterity uye kuneta zvakanyanya. Sezvo hosha iri kufambira mberi muchimiro, vazhinji vanorwara havadi iyo wiricheya zvachose, vamwe vanozozvida pane imwe nguva vamwe vachizozvida ipapo ipapo.
Varwere vanoda a wiricheya kuitira kuti urambe uri nhare unofanirwa kuchengeta zvinhu zvinotevera mupfungwa. Kuhodha a wiricheya Pasina kunyatso tarisa izvo zvinodiwa nemushandisi zvinogona kukanganisa kwenguva refu.
MS inogona kuita kuti mamwe mabasa ezuva nezuva aite senge asingakwanise. Nekodzero wiricheya, vanogona kutangazve zvimwe zvezviitiko zvavo zvenguva dzose.
wiricheya Kurudziro yeMS Vanotambura: Kuchengetedza Kutenderera
Nzira huru yekusimudzira kutenderera kwemurwere ndeyekusundira iyo wiricheya..
Nesimba wiricheya, kufamba kunodzorwa ne joystick. Ikoko hausi mukana wakawanda wekuwedzera kutenderera nemhando iyi wiricheya nekuti havafanirwe kusundira kufamba kwacho wiricheya.
Neimwe nzira, manyore mavhiripu inofambiswa nemushandisi. Kunyangwe kutenderera kuchizowedzerwa, kukuvara kwekushushikana kunogona kuve mhedzisiro uye kungatokuvadza kune avo vane MS. Kusundira a wiricheya yemawoko inogona kukanganisa magokora, mapfudzi, mawoko nemaoko nenguva. Kukuvara kwekushushikana kunogona kukonzera matambudziko senge mhasuru misodzi, carpal tunnel kana kukuvara kwekubatana.
Simba rinobatsira mavhiripu kupa kukurudzira kune varwere vasina masimba akasimba ekumusoro. Iyo komputa mota inoziva chaizvo kuti ingani rubatsiro rwekupa uye ichabatsira ku kupa kutenderera uye kudzikisira kukuvara kwekushushikana..
Customized mavhiripu kupa nyaradzo yezuva nezuva kune vanorwara neMS. Iyo Tailwind simba-inobatsira wiricheya ine customizable sarudzo senge upamhi hwechigaro, camber, chigaro chekurasa, chinogadziriswa nzvimbo yegiravhiti nzvimbo uye mafuremu angles. Izvi zvinogadziriswa zvinhu kuwedzera huwandu hwekufamba uye kwezuva nezuva mashandiro.
Kuramba Mobility uye Rusununguko
zvose mavhiripu dzakasiyana, nemisiyano mikuru iri yekushandisa, simba rekubatsira kana izere nemagetsi. Vashandisi vanogona kunge vasingazive iyo Mobility vanopa. Ukangonzwisisa misiyano iyi, zvinokubatsira iwe kuita sarudzo ine ruzivo uye nekudzora matambudziko gare gare.
simba mavhiripu ndivo inorema, yakakura uye yakaoma kufambisa munzvimbo diki. Kutakura simba wiricheya marefu marefu anogona kunge akadhura chaizvo.
A wiricheya yemawoko yakareruka asi hapana rubatsiro rwemotokari. Mushandisi anofanirwa kusundidzirwa kana vasina kusimba zvakakwana kuti vazvisundire ivo. Vashandisi vanogona Push kazhinji vaneta uye vanonzwa kukuvara mupfungwa.
Simba rinobatsira wiricheya inopa i yakaringana muyero wemaitiro uye simba. Mushandisi anogona kuchengetedza kutenderera nekusunda uye nekubatsira kukanda mukati pazvinenge zvichidikanwa.